Ikhaya eliSweet Home Porto di Maratea - I-Airbnb
Ikhaya eliSweet Home Porto di Maratea
Ikhaya elimnandi lasekhaya yichalet encinci epholileyo ejikelezwe yindalo, kufutshane nePorta yaseMaratea ekumgama wokuhamba. Igadi inika umbono omangalisayo weMaratea's Krestu uMhlawuleli kunye nokutshona kwelanga ngaselwandle. Ikhaya eliSwiti leKhaya, elibekwe kwilali yokuloba epictoresque, libonelela ngokuphumla kunye namava enyani.
Indlu iqulunqwe ngumgangatho ophantsi kunye negumbi lokuhlala, i-sofa eguqulwayo kunye ne-sofa, i-TV ye-satellite, indawo yokudlela kunye nekhitshi exhotyiswe kakuhle ene-oven, i-toaster, ifriji kunye nomatshini we-nespresso. Kukwakho umatshini wokuhlamba kunye negumbi lokuhlambela elineshawa.
Izinyuko ezijikelezayo zikhokelela kumgangatho wokuqala, i-mansard enefestile ezinkulu kunye nenethi yeengcongconi, ipaseji enesofa, igumbi lokulala elinebhedi yabantu ababini, kunye negumbi lokuhlambela.
Umoya womoya uyafumaneka kwimigangatho yomibini. Igumbi lokuhlala lijonge umfanekiso oqingqiweyo kaKristu uMkhululi.